Soo dejisan doPDF 10.8.125 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: doPDF
doPDF – fudud ah si ay u isticmaalaan software si loogu badalo files si PDF format. software The madax bannaan abuuraa printer dalwaddii oo lagama maarmaan ah si ay u abuuraan faylasha PDF iyo si toos ah waxay ku tusaysaa in liiska qalabka daabacaadda. doPDF awood si loogu badalo files galay format PDF adigoo isticmaalaya noocyo kala duwan oo xafiiska, image ama web barnaamijyada kuwaas oo awood wax soo saarka files for daabacaadda. software The kuu ogolaanayaa inaad dhigay bogga size loo baahan yahay iyo habaysaa xalka. doPDF leedahay interface ah dareen leh oo gubtay, khayraadka nidaamka ugu yar.
Badalidda ugu of graphic iyo qoraalka qaabab galay PDF
xiriir Automatic barnaamijyada ah in wax soo saarka awood files ee daabacaadda
search Text ee faylka PDF abuuray
Settings ee fursadaha raanta
Soo dejisan doPDF
Faallo ku saabsan doPDF
doPDF Xirfadaha la xiriira